Chiumbwa chaAmbuya Nehanda Chinoparurwa muHarare
Chiumbwa chine mucherechedzo waMbuya Nehanda chaparurwa nhasi muHarare nemutungamiri wenyika, VaEmmerson Mngangagwa, vemapato anopikisa achiti uku kutambisa mari yenyika panguva iyo nyika yakatarisana nematambudziko akawanda.
Vachitaura pakuparurwa kwechiumbwa ichi uko kwaitwa vanhu vari mavhu nemarara pachiitiko ichi pasingatevedzerwi zvakatarwa nehurumende pamwe nesangano reWorld Health Organization kuti vanhu vasaungane senzira yekuderedza mukana wekupararira kwechirwere cheCovid-19, VaMnangagwa vakurudzira ruzhinji rweZimbabwe kuti rwushande nesimba kuitira kusimudzira hupfumi hwenyika senzira yekuzadzisa zvido zvaMbuya Nehanda.
Mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato reZanu PF, VaTafadzwa Mugwadi, vati chivakwa chaMbuya Nehanda chaparurwa chichabatsira vakuru nevadiki munyika kuti vanyatsoziva nhoroondo yenyika.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance, VaClifford Hlatshwayo, vatiwo ruremekedzo rwukuru rwanga rwuchifanira kupihwa Mbuya Nehanda kuve nehutongi hwejekere munyika.
Mutauriri wemutungamiri weMDCT VaDouglas Mwonzora, VaLloyd Dama, vati kunyange hazvo zvakanaka kuti Mbuya Nehanda varemekedzwe nechivakwa ichi icho chiri panosangana migwagwa inoti Julius Nyerere naSamora Machel, nguva yachaparurwa haina kuringana nemariro akaita zvinhu munyika.
Vati mari yashandiswa nehurumendepabasa iri ingadai yashandiswa kugadzirisa zvinhu zvakawanda zvinosangaisira nyaya dzehutano nemigwagwa isina kumira zvakanaka.
Asi gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko, Amai Monica Mutsvangwa, vati zvakakosha kuti micherechedzo yakadai ivepo vachiti mari haina kukosha pazvinhu zvakadai.
VaMnangagwa vadzokorodza zvakare kuti hurumende yavo iri kushanda zvakasimba kuti dehenya remusoro waMbuya Nehanda ridzoswe kubva kuEngland.
Mbuya Nehanda Charwe Nyakasikana, avo vaive svikiro rerudzi rweZezuru, vakashanda zvakasimba mukuronga Chimurenga chekutanga chekuramba kupambwa neBritish Couth Africa Company ichitungamirirwa naCecil John Rhodes kutanga muna 1889 hondo iyi ikazotsviririra muna 1896 na 1897, vakazofa muna 1898 mushure mekusungirirwa pamuti asi vakasiya vataura kuti “Mapfupa angu achamuka”.
Pakuparurwa kwe statue iyi panga paine gurukota rekuSouth Africa rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, Amai Naledi Pandor, avo vasvitsawo chikafu kuna VaMnangagwa kuState House chabva kuhurumende yavo chakanangana nekubatsira vanhu vakakanganiswa nedutumupengo reCyclone Idai muna 2019.
Mushure mekuparura mucherechedzo waMbuya Nehanda, VaMnangagwa vapawo motokari kumadzishe akanga asina kuwana motokari pakambopihwa mamwe madzishe motokari idzi vachiti madzishe anofanira kuchengetwa vachiti mukuru mukuru hanga haigare pfunde.